INova Scotia Duck Tolling Retriever: Le Retriever Encane Yenza Ukuvela Okukhulu - Izinhlobo
INova Scotia Duck Tolling Retriever: Le Retriever Encane Yenza Ukuvela Okukhulu
INova Scotia Duck Tolling Retriever (NSDTR), i-purebred purebred, ivame ukubizwa ngeToller ngamafuphi.
Yize kunjalo, ihamba ngamagama amaningi afana neLittle River Duck Dog, Little Red Duck Dog, Novie, Scotty, Tolling Retriever, Duck Toller, neYarmouth Toller.
Lezi zinja zomndeni ezithembekile zihlakaniphile ezinamandla okuba yizinkinga. Imvelo yabo yamandla aphezulu kungenzeka ingabi ngeyawo wonke umuntu, kepha lolu hlobo oluyingqayizivele lusanikeza okuningi.
Ukubukeka kweNova Scotia Duck Tolling Retriever
Ukunakekela Umbalisi Wakho
Unempilo futhi Uyajabula
I-Toller vs. Izinhlobo ezifanayo
Ukuyihlanganisa: Isixhumi esifushane saseJalimane
Ngifanele Ngithole Isikhulumi?
Ukufunda Okuqhubekayo: Izinhlobo ezifanayo
Lolu hlobo oluthile lwe-retriever lwaqala ngekhulu le-19 nabomdabu baseMicmac baseCanada. Baqeqeshe izinja zabo ukulingisa indlela ekhokhelwa yizimpungushe.
I-Tolling, igama lesiNgisi Elimaphakathi, ubuciko bokuheha amadada phakathi kwezibhamu zabazingeli, njengezimpungushe zesifunda. Ngenxa yaleli khono, la “ma-duck decoys” ayevame ukubizwa ngokuthi “ama-gundogs.”
Abazingeli beLittle River Harbour eYarmouth County, eNovia Scotia, baziqaphele lezi zinja base beqala ukuzakhela ezabo.
Laba bazingeli bahlanganisa izinhlobo eziningana:
Ama-Golden Retrievers, ama-Cocker Spaniels, ama-Labrador Retrievers, ama-Flat-Coated Retrievers, i-Chesapeake Bay Retrievers, ne-Irish Setter, okungenzeka kube ne-Collies yasepulazini kanye nezinja zokuqala ze-Micmac.
Izinja Zedada Elincane zaziwumphumela wemizamo yazo, kepha zaziwuhlobo oluthile olwaziwayo.
Ngo-1945, i- ICanada Kennel Club (I-CKC) yabona lo mhlobo futhi yaguqula igama laba yiNova Scotia Duck Tolling Retriever, eyaqala ukukhanyisa ngalezi zinja.
Uhlobo lwathola indlela eya e-United States ngawo-1960, lapho yahlala ingaziwa kakhulu khona.
Ithole ukuthandwa okuthile ngeminyaka yama-70s nama-80s, kwathi ngo-1984, i- Iklabhu yeNova Scotia Duck Tolling Retriever e-United States yasungulwa.
Ngo-2001, i- I-American Kennel Club (AKC) ivumele uToller ukuthi angene kwi-Foundation Stock Service. Lezi zinja zivunyelwe ukuqhudelana emicimbini efana nokushesha, ukulalela nokulandela ngomkhondo.
Ekugcineni, ngo-2003, i-AKC yamukela ngokusemthethweni iTollers njengengxenye yeqembu labo lezemidlalo.
Lolu hlobo lwenja oluphakathi nendawo lulinganiselwe kahle emandleni nasempumelelweni, olwafika lapho lusemuva kwezinyoni zasemanzini.
Banemigqa engemuva eholele emisileni emide, enezimpaphe ezinhle. I-Toller ifaka isifuba esijulile esisondela ngasemuva.
Zinobubanzi obubanzi obuzungeze kancane ezindlebeni. Izindlebe zazo zingunxantathu ngamathiphu ayindilinga, futhi abekwe phezulu futhi emuva kakhulu ekhanda.
Amehlo oToller ahlukaniswe kude, futhi azoba ngumthunzi onsundu noma we-amber. Bazophinde babe nekhala elimnyama noma elinsundu ekugcineni kwesifonyo sobude obuphakathi nendawo.
Ngabe iToller iba nkulu kangakanani?
Yize iNova Scotia Duck Tolling Retriever iyinja esesilinganisweni esiphakathi, yizona ezincane kunazo zonke izinhlobo ze-retriever.
Basapakisha amandla amaningi kuzimele zabo ezilinganiswe kahle, futhi bangenza kahle efulethini noma endlini inqobo nje uma uzigcina uzilolonge kahle.
INova Scotia Duck Tolling Retriever :
Ukuphakama: Amasentimitha angu-18-21 Amasentimitha angu-17-20
Isisindo: Amakhilogremu angama-35-50
Ibhantshi Elihlukile Lokuhamba
Izikhulisi zinejazi elikhethekile lokuxosha amanzi elenzelwe ukuvikelwa emanzini abandayo.
Ingubo yangaphansi ithambile futhi iminyene, kanti ijazi langaphandle liphakathi nendawo futhi lithambile uma lithinta. Ijazi labo lizophinde libe nezimpaphe zobude obulinganiselwe.
Amajazi kaToller abomvu futhi ahlukahlukene ngokubomvu. Izinwele zabo zingahlala noma kuphi phakathi kwamathoni wethusi abomvu asagolide kuya kumnyama.
Izinga lokuzalela libheka noma imiphi imibala ngaphandle kokuhlukahluka okubomvu njengokungafaneleki.
Ukuhlukaniswa Kwejazi Lokuhlukanisa
Kujwayelekile ukuthi amaToller abe nezimpawu ezimhlophe. Lezi zimaki zingavela ekugcineni komsila, ezinyaweni, emlilweni, noma esifubeni ukwengeza ubukhazikhazi engutsheni yabo.
UToller ozinikele wenza isilwane somndeni esihle kakhulu. Bahle ngezingane futhi bayathanda ukudlala. Bangaziphatha bebekelwe abantu abasha, kepha lokhu kumane nje kuyisixwayiso, hhayi amahloni.
Uma uzihlanganisa kahle, lokhu kuziphatha kunganqandwa.
Izikhulumi nazo zenza kahle nezinye izilwane ezifuywayo, kodwa uma unikezwa idrayivu yazo yokuzalwa, uzofuna ukuzigcina kude nezilwane ezincane njengezinyoni namakati.
Umdlwane wakho uzohlala ephapheme futhi ekhonkotha ukukwazisa, kepha ngaphandle kwalokho, ngeke ubazwe kakhulu. Kodwa-ke, ama-Tollers akuzona izinqaphi ezihamba phambili.
Lapho uMbulali wakho ejabule ngokweqile, bakhiqiza 'ukukhala kothisha,' ukukhala okuphakeme kakhulu njengoba kubonakala kulokhu ividiyo . Khumbula ukuthi lokhu ngeke kube ngaso sonke isikhathi, kepha uzokwazi ukuthi bathokozela nini ukudlala.
Ababulali izinja ezihlakaniphile eziphendula kahle ekuqiniseni okuhle.
Banamandla amaningi adinga ukukhuthazwa ngokomzimba nangokwengqondo okubenza bakwazi ukuzivumelanisa kakhulu nokuqeqeshwa okubazuzisayo ngenkathi kubenza bazizwe belusizo.
Imvelo yabo esebenzayo ingaholela ekuhlukaneni kokukhathazeka nobubi uma ishiywe yodwa isikhathi eside kakhulu noma ingavuselelwanga ngokwanele.
I-Toller yakho izoba nokujabula, isimo sothando, futhi izothanda ukugona ngemuva kokuphela kwamandla. Bazokuthanda ukuba umngane wakho omkhulu.
INova Scotia Duck Tolling Retriever ingaba nezidingo eziphakeme zokulungisa uma kukhulunywa ngokuzilolonga nokuzivocavoca umzimba.
Ukuqinisekisa ukuthi ungahlangabezana nalezi zidingo kubaluleke kakhulu, kepha yizilwane ezifuywayo eziguquguqukayo ezingachuma kunoma iyiphi indawo.
Bazokwenza kahle kakhulu emazingeni okushisa amaphakathi, kepha bakhuliswa kahle ukubamba amakhaza.
Izikhulisi zinezinga eliphezulu lamandla, futhi kuzodingeka uqiniseke ukuthi ziyayikhipha uma ungafuni ukuthi zibe abahlupho. Ukuhamba okude kwansuku zonke, ukugijima, nokulanda imidlalo kunconywa ukuyigcina yanelisekile.
Uma unegceke elikhulu elingasemuva, bazothanda ukulisebenzisa ngokugcwele. Abatsheli bazoziphatha kahle ngehora lokuzivocavoca usuku ngalunye.
Imidlalo yeCanine nayo iyindawo enhle. Abafundisayo bayathanda ukubamba iqhaza emidlalweni ye-agility, i-flyball, nomsebenzi wasensimini njengoba kuvivinya ingqondo nomzimba wabo.
Le midlalo yezinja izoqinisa ukuqeqeshwa kwabo futhi iqinise isibopho sabo nawe.
I-Toller ayiyona i-hypoallergenic njengoba ijazi labo eliphindwe kabili lizokubona ukuchitheka kwesizini. Ngalesi sikhathi, kuzodingeka ukuxubha nsuku zonke. Ngaphandle kokuchithwa kwabo kwesizini, ukuxubha masonto onke kuzokwanela.
Uma ubalungisa, qiniseka ukuthi unaka ngokukhethekile izimpaphe ezingubeni zabo. Uzodinga ukuxubha amathanga ngaphandle kwezimpaphe ngokucophelela.
Ukugeza uMbulali wakho kanye ngenyanga ngokuvamile kwanele, kodwa ngeke banqikaze ukuhambisa ukungcola nodaka, ngakho-ke kungadingeka kaningi.
Kukho konke ukuzilungisa kwabo, hlola izindlebe zabo ukuqinisekisa ukuthi azinakho ukungcola futhi uqiniseke ukuthi bayazisika lezo zipikili kanye ngenyanga.
Ukudla Kwakho Kwe-Doggies
Ababhalisi bazodinga ukudla kwezinja okuseqophelweni eliphezulu okwenzelwe uhlobo oluphezulu lwamandla. Ukudla kwenja eyomile nakho kungasiza ekugcineni amazinyo abo.
I-Toller yakho izodinga izinkomishi ezi-2-3 zokudla ngosuku kuya ngezinga lomsebenzi wazo nosayizi, kepha ukulandela indlela yokudla okunconywayo njengoba bekhula kungcono kakhulu.
Uhlala ufuna ukukhumbula ukuthi ukudla okuthile akukwazi ukunikezwa inja yakho.
Uma kwenzeka ungaqiniseki ngokudla okuthile, cwaninge ngaphambi kokukuvumela ukuba kube nakho. Bheka lokhu list kusuka ku-ASPCA ukusiza ukuzigcina unolwazi.
Umbalisi wakho uzoba ngumdlwane ophilile ngokujwayelekile onesikhathi sokuphila seminyaka eyi-12-14.
Bangakwazi ukuthambekela ekuphazamiseni okuzenzakalelayo kanye ne-Addison's Disease, okungenzeka ingabonakali kuze kube yilapho sebekhulile. Kodwa-ke, ezinye izinkinga zempilo zingavela phakathi nokuphila kwabo.
Izimo Zempilo Okungenzeka:
UCollie Eye Anomaly
Ukuvakashelwa njalo nodokotela wezilwane kuhlale kunconywa ukugcina i-pup yakho isesimweni esiphakeme. Kukhona ngisho nokuhlolwa nokuhlolwa okwenziwa i-vet yakho ukuqinisekisa ukuthi iToller yakho iphilile.
Ukuhlolwa Kwezempilo Nezivivinyo Zesikhashana:
Ukuhlolwa kwe-PRA Optigen DNA
Ukuhlolwa Kwezifo Ze-Juvenile Addison's Disease DNA (JADD)
I- I-Orthopedic Foundation Yezilwane (I-OFA) iyinsiza enhle kakhulu uma kukhulunywa ngokunakekela isilwane sakho. I-OFA inikeza ukuhlolwa kwe-hip ne-ophthalmologist kanye nokuhlolwa kwe-DNA.
Banazo futhi uhlu lokuhlolwa okunconyiwe ngohlobo . I-OFA izinikela ekusizeni izilwane ezifuywayo, futhi ziyinhlangano ethembekile.
INova Scotia Duck Tolling Retriever inosayizi kadoti ojwayelekile wemidlwane eyisikhombisa, futhi ingaba ngentengo. Amanani ajwayele ukuqala cishe u- $ 1500, kepha abanye abalimi bangakhokhisa okungange- $ 4000.
Imali ekhokhwayo yomfuyi ehlonishwayo ingaba phezulu, kodwa bazohlola izimo zofuzo, bazobheka phambili ngomlando wezokwelapha, futhi bazozihlanganisa nezinhlangano ezithembekile.
Izitolo zezilwane ezifuywayo namapulazi e-puppy azoba eshibhile, kepha uyeka isiqinisekiso sokuthi inja yakho ivela esitokisini esihle sezakhi zofuzo naleyo ntengo.
Amapulazi amaPuppy abeka phambili inzuzo, ngakho-ke izinja zawo zivame ukuhlala ezimeni ezinganele ngokunganaki ukunakekelwa kwezempilo nokunakekelwa kwekhwalithi.
Izindleko zokuqala ezifana ne-microchipping, amathoyizi, i-leash, nokukhipha noma ukufaka i-neutering kungakubiza enye i- $ 350- $ 500 ngokuya ngezici ezahlukahlukene.
Ngemuva kwalokho, cishe uzochitha cishe u- $ 1000 ngonyaka ezindlekweni zonyaka zokudla, ukuvakashelwa kwezilwane nezidingo zokuzilungisa.
Uma kukhulunywa ngokuthola umfuyi we-Toller, kunezinsizakusebenza ezinhle kakhulu ongazisebenzisa.
Inikezwa yiNova Scotia Duck Tolling Retriever Club ukuthunyelwa kwabazalanisi esizeni sabo, futhi baqinisekisa ukuthi bangabalimi abahloniphekile.
I-American Kennel Club nayo ineziningi abalimi abathembekile kubhalwe esizeni sabo. Ngezinsizakusebenza ezinhle njengalezi ezitholakalayo, kufanele ikusize kakhulu ukufuna umdlwane weToller.
Ngingummeli wokutholwa, futhi ezinye izinhlangano ziyazinikela ekusindiseni amaToller. INova Scotia Duck Tolling Retriever Club inekhasi eliqondene ngqo Izikhulisi ezamukekayo .
IToller Rescue Inc.iqembu labantu abanomqondo ofanayo bonke abasebenzela ukuhlenga lolu hlobo oluphilayo. Zinezinja ezamukelwayo ezibalwe kuzo Ikhasi labaTholayo elitholakalayo .
Ngincoma ukusebenzisa lezi zinsizakusebenza ukuthola inja edinga ikhaya laphakade.
Njengoba kunikezwe ukuthi abaToller banemvelaphi ehlukahlukene yezakhi zofuzo, ungahle ube nelukuluku lokuthi bahlangana kanjani nabanye ontanga yabo.
Yebo, sibheke iGolden Retriever neBorder Collie ukuhlola izici ezifanayo nokwehluka okuhlukile kumaTollers.
IGolden Retriever vs The Toller
IGolden Retrievers inkulu kakhulu, igolide ngomthunzi, futhi ihlakaniphe ngokwengeziwe ngokushayela okuphansi.
IGolden Retriever iyi-purebred ethandwayo abantu abaningi abangayibona.
Uma uwaqhathanisa neTollers, into yokuqala ongayiqaphela ngosayizi. Izikhulisi ziphakathi nendawo kanti i-Golden Retrievers zinosayizi omkhulu.
IGolden Retrievers ime phakathi kwama-intshi angu-21-24 ubude futhi ingaba nesisindo esiphakathi kwamakhilogremu angama-55-75, kuya ngeminyaka nobulili.
Kukhona futhi umehluko ohlukile emajazini abo. Ngenkathi zombili izinhlobo zifaka amajazi aphindaphindiwe amanzi, zizoba imibala ehlukile.
Izikhulisi zingumbala obomvu, kuyilapho amaGolden Retrievers enza ngokuvumelana negama lawo ngokuhlukahluka komthunzi wegolide.
AbakwaGoldens banezidingo ezifanayo zokuchithwa nokuzilungisa zonyaka, futhi futhi abayi-hypoallergenic.
Ungaqaphela umehluko kumoya wezinhlobo. Zombili ziyizinhlobo zokudlala, ezinothando, kepha iGolden Retriever ihlakaniphe kakhulu ngedrayivu ephansi yezisulu.
AbakwaGoldens bangenza kangcono nabantu nezinye izilwane ezifuywayo, kepha banamathuba aphezulu wokukhathazeka ngokwehlukana. IGoldens ingaba insizakalo enhle kakhulu noma izinja zokwelapha ngenkathi iTollers ingeke.
Isikhathi sokuphila esilinganiselwe se-Golden Retrievers sifushane kakhulu eminyakeni eyi-10-12, kepha ngokuvamile ziyizinja ezinempilo.
Njengoba kunikezwe ukuthi bakhulu kunababalisi, izidingo zabo zokudla nezokuzivocavoca zizoba nkudlwana. IGoldens nayo izokhipha amathe ngaphezu kwamaTollers.
Zombili lezi zinhlobo zizokunika umngane onothando onobungqabavu, kepha uhlobo ngalunye lunezidingo ezihlukile zokuzihlola ngaphambi kokuthatha isinqumo sokwenza isilwane.
IBorder Collie vs. The Toller
IBorder Collies inengubo ephindwe kabili emelana nesimo sezulu enemibala ehlukahlukene nokumaka eboyeni babo.
I-Border Collies yizinja eziphakathi nendawo ezilingana ngokomzimba namaTollers. Zime ngamasentimitha angu-18-22 ngesisindo esiphakathi kwamakhilogremu angama-30-55.
Umehluko wokuqala omkhulu ongawubona ukujazi leBorder Collies. Izikhulisi zinezingubo eziphindwe kabili ezingangeni amanzi, kuyilapho iBorder Collies inengubo ephindwe kabili emelana nesimo sezulu engaba bushelelezi noma ibe lukhuni.
IBorder Collies nayo inezinhlobonhlobo zemibala nokumaka okungagqama eboyeni babo, kuyilapho iTollers izoba yimibala ebomvu kuphela. Futhi ayi-hypoallergenic.
Ngayinye yalezi zinhlobo inesimo sayo. IBorder Collies yizinhlobo ezihlakaniphe kakhulu, ezenza zizimele ngokwengeziwe futhi zizwele ekushintsheni okuvamile.
IBorder Collies ibuye yenzele ababheki abangcono kangcono yize bengcono nabantu ongabazi. Banokushayela okuncane kodwa bangaba kubi nezinye izilwane ezifuywayo.
Kodwa-ke, zombili izinhlobo zenza kahle ezinganeni.
IBorder Collies yabelana ngokuphila okufanayo kweminyaka eyi-12-15, futhi ngokuvamile izinja ezinempilo.
Kodwa-ke, ama-Border Collies angadonswa ekukhathazekeni okuthile kwezempilo okufanele kuhlolwe njalo.
Futhi banamazinga aphezulu wamandla angadinga ukuzivocavoca umzimba nsuku zonke, kepha izidingo zabo zokudla zingafaniswa noma zibe ngaphansi kunezo zeToller.
Izinhlobo zohlobo lwenzelwa umlingani osezingeni, kepha kufanele ucwaninge kahle izidingo zazo ezihlukile ngaphambi kokuthatha isinqumo sokuletha ikhaya elilodwa.
I-German Shorthaired Toller idabula phakathi kwe-German Shorthaired Pointer kanye neNova Scotia Duck Toll Retrievers.
Kungumxube omncane kuya kokulingene onezimpawu ezahlukahlukene ngokuya ngomzali abamthatha ngemuva kokuningi.
Isikhulumi saseJalimane esifushane : Owesilisa Owesifazane
Ukuphakama: Amasentimitha angu-15-20 13-18 amayintshi
Isisindo: Amakhilogremu angama-40-50 Amakhilogremu angama-35-45
Ukulindela Ukuphila: Iminyaka engu-12-14
Asazi okuningi ngomlando walolu hlobo, ngakho-ke okungcono kakhulu ukuwaqonda ukuqonda izinhlobo zabo zabazali.
I-Toller yephulwe ubude lapha, kepha ngincoma ukuthi ngibheke ifayela le- Ikhasi lokuzala le-AKC ukuthola eminye imininingwane nge-German Shorthaired Pointer.
Singakucabanga ukuthi lesi siphambano sasihloselwe ukuzingela nokubakhokhela ngenxa yobudlelwano babazali babo nemisebenzi.
Lesi siphambano sinokubukeka okuqinile, futhi ukwakheka kwaso kwendlebe kungaqhamuka kunoma yimuphi umzali.
Izindlebe zazo zingaba phezulu phezulu ekhanda ngesimo esingunxantathu njenge-Toller, noma zingaphonsa phansi ezinhlangothini zekhanda njengesikhombi.
Banamehlo ansundu, isifonyo sobude obumaphakathi, nekhala elingashintsha ngombala kodwa livame ukuthatha umbala webala.
I-German Shorthaired Toller iyi-German Shorthaired Pointer kanye neNova Scotia Duck Tolling Retriever mix.
Isikhombi saseJalimane esifishane sinebhantshi elifushane, eliwugqinsi, eligxothe amanzi. Leli jazi lingaba mhlophe, nsundu, noma libomvu, kepha umbala obomvu ungagqama ngokweqile.
Ijazi lingabonisa ukumakwa okumhlophe ezinyaweni, esifubeni, nasemsileni njengeToller, kodwa futhi lingaduma noma likhethwe. Kodwa-ke, kulula ukuyigcina ngamabhulashi masonto onke nokugeza njalo ngenyanga.
Lolu hlobo oluxubekile luyinja yomndeni ethembekile ezokwenza kahle kubantu ongabazi nezingane. Bazoba abahlakaniphile, abaqeqeshwe kalula, futhi bajabule kakhulu eceleni kwakho.
Kodwa-ke, azenzi izinja eziqaphe kakhulu, futhi ukukhathazeka ngokwehlukana kuvamile.
I-German Shorthaired Toller yakho izoba nezinga eliphezulu lamandla, futhi izodinga ukuhamba okude nsuku zonke, ukugijima, nemidlalo ukuhlangabezana nezidingo zabo zokuzivocavoca.
Kuzodingeka ukuthi usebenze ukuze uphathe la ma-rovers we-rambunctious futhi uwagcine ekutholeni isisindo.
Okuwukuphela kwendlela yokulindela ukukhathazeka kwezokwelapha lokhu okuvundlile ukubheka izinhlobo zomzali.
Ngalokho engqondweni, singacabanga ukuthi iBloat, i-Hip Dysplasia, ne-Progressive Retinal Atrophy (PRA) kungaba yizinkinga ngesikhathi sokuphila kwenja.
Namathela ekuvakasheni okuvamile kwe-vet ngemizimba ethile ngezikhathi ezithile, ukuhlolwa kwamehlo, ama-X-ray, kanye ne-CT Scans ukugcina ingane yakho iphilile.
IGerman Shorthaired Toller nayo ayisona isizinda esidumile, okwenza kube nzima ukusithola futhi kubize uma usukutholile.
Uma unenhlanhla ngokwanele yokulandela umfuyi ohlonishwayo, ungakhokha u- $ 1000- $ 2000 ngomdlwane omusha.
I-German Shorthaired Toller iyi-crossbreed eyingqayizivele evela kubazali abahle, futhi yize ingahle ingabi yinto ejwayelekile, ingaba abangane abahle kumuntu ofanele.
Uma ukujabulela ukugijima okuhle, ukuhamba amabanga amade, nemidlalo nenja yakho, lolu hlobo lungaba olwakho. Bazothanda ukudlala nomndeni wonke, bazophendula ekuqeqeshweni, futhi bazimisele ukujabulisa.
Uma ungeke ukwazi ukuphatha ezinye zezidingo zabo eziphakeme zesondlo, kungaba ngcono ukugwema lolu hlobo.
Izidingo zabo zokuzilungisa nokuzivocavoca umzimba zingadla isikhathi esiningi kwabanye abanikazi, futhi ukukhathazeka ngokwehlukana kungaba yinkinga uma usuhambe isikhathi eside kakhulu.
Uma usuvele unezinye izilwane ezifuywayo ezifana namakati noma izinyoni, iToller ingahle ingabi yinhle kakhulu ngenxa yokushayela kwayo inyamazane.
I-Toller's inezidingo ezithile futhi ezihlukile ezidinga izinga elifanele lokunakekelwa, okungaba ngumzamo odla isikhathi. Noma kunjalo, kunoma ngubani okwazi ukugcina, bayizinja ezithembekile, ezinothando.
Uma uToller engazizwa njenge-pup elungile kuwe, sithole izinhlobo ezithile ezifanayo ezingaba yijubane lakho. Bheka lezi ezinye izinhlobo ukuze ubone ukuthi zikala kanjani.
I-Retriever Eboshwe Nge-Flat
i-pit bull izala nezithombe
inja izingela amagama wesilisa
umbala wekhala elibomvu wengwe obomvu
amagama amhlophe amahle wezinja
ngingasho kanjani ukuthi nginenja enjani